News | मेलम्ची
News | Tag: मेलम्ची
मेलम्चीको पानी वितरणका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउन पुनः परीक्षण गर्ने तयारी भइरहँदा पानी वितरणका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पानी पुनः परीक्षणको तयारी गरिरहँदा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालले अधिकांश स्थानमा नयाँ र कतिपय
कामपा र मेलम्चीबीच भगिनी सम्बन्ध
सिन्धुपाल्चोक । काठमाडौँ महानगरपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्यालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर भगिनी सम्बन्ध शुरुआत गर्नुुभएको हो । कामपाले यसअघि मुलुकका रामग्राम र चन्दननाथ नगरपालिका तथा
‘मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झार्ने सपना कार्यान्वयन नजिक’
काठमाडौँ । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउने चार दशक लामो सपना कार्यान्वयनको नजिक आइपुगेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।
के हुँदैछ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ?
मेलम्ची । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षण आगामी महिनाभित्रमा गरिने भएको छ । गत असार महिनामा भएको परीक्षणका क्रममा दुर्घटना भएपछि सुरुङमा रहेका त्रुटि सच्याएर पुनः परीक्षण गर्न लागिएको छ ।
कहिले आउला मेलम्चीको पानी ?
काठमाडौँ । आयोजनाको सुरुङमा रहेको गेटको फ्रेम परिवर्तन गर्न समय लाग्ने हुँदा तत्काल उपत्यकामा पानी आउने सम्भावना नभएको बताइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा असार मसान्तसम्म उपत्यकामा पानी झार्ने र पाइपको परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
मेलम्चीमा ढिस्को खस्दा ८ मजुदर पुरिए, उद्धारकार्य जारी
सिन्धुपाल्चोक । मेलम्चीमा माटोको ढिस्को खस्दा ९ जना पुरिएका छन् । एक्कासी पहिरो आएपछि ९ जना पुरिएका हुन् । उनीहरुमध्ये एक जनाको जीवितै उद्धार गरिएको र बाँकीको उद्धारकार्य जारी रहेको छ प्रहरीले जनाएको छ ।
मेलम्चीको सुरुङमा आयोजनाकै इञ्जिनियर र चालक बेपत्ता
काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङमा दुई जना बेपत्ता भएका छन् । हेलम्बु गाउँपालिका– १ स्थित सुरूङबाट पानी परीक्षण भइरहेका बेला एक्कासि पानी बाहिर आएपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्न गएका आयोजनाकै इञ्जिनियर र चालक बेपत्ता भएका हुन्। सुरुङमा पानीको परीक्षणको क्रममा समस्या देखिएपछि अवलोकन गर्न गएका ४ जनालाई पानीले बगाएको थियो ।
मेलम्चीमा फेरि अर्को विवाद
मेलम्ची । मेलम्चीको पानी पथान्तरण गरेकोमा विरोध सुरु भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र खानेपानी मन्त्रालयले एकातर्फी रुपमा पानी पथान्तर गरेपछि सिन्धुपाल्चोकका जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरुले विरोध गरेका हुन् । सरोकारवालाहरुले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुनै समन्वय नै नगरी मन्त्रालयले गरेको यस्ता हर्कतबारे दुःख प्रकट गरिसकेको छ ।
मेलम्चीमाथि वर्षौंदेखि उठ्दै आएका प्रश्नको बिटमार्ने समय छिट्टै आउने मन्त्री मगरको भनाई
काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्चीमाथि वर्षौंदेखि उठ्दै आएका प्रश्नको बिटमार्ने समय छिट्टै आउने बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट माथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री मगरले उक्त कुरा बताएकी हुन् । मन्त्री मगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मेलम्चीबारे प्रश्न उठाउने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएकी छन्।
मेलम्चीको पानी आर्थिक वर्षको सुरुवातमै वितरण गरिने, काम शुरु गर्न ५ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमै मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुबै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कुराको घोषणा गरेका हुन् ।